Soo dejisan Doro PDF Writer 2.07 – Vessoft
Soo dejisan Doro PDF Writer
Doro PDF Writer – software ku haboon si ay u abuuraan PDF-files. Doro PDF Writer waxaa gundhig in nidaamka iyo abuuraa drive dalwaddii printer in la PDF files-shaqeeyaan. Software ayaa awood u si ay u ilaaliyaan dokumentiga by sirta ah iyo codsan xadeyn ku saabsan daabaco ama sawiridda ee file a. Doro PDF Writer kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan PDF files-ka codsi kasta oo ku jira shaqo daabacayo. Doro PDF Writer ayaa interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
Abuuritaanka ee PDF-files
In la difaaco faylasha by password
Xadidaada daabacaadda iyo koobiyeynta faylasha
Dhexgalka barnaamijyada kale
Doro PDF Writer Software la xiriira:
Українська, Français, Español, Deutsch... novaPDF 8.7.943
العربية, English, Français, Español... WinDirStat 1.1.2.80
English, Español, 中文, 日本語... jDownloader 0.9.581 iyo 2 beta